रबिन्द्रको ह्याट्रिक क्षेत्रमा बामदेव ! धनराजको पनि आकांक्षा, बामदेव उठे रबिन्द्र मिश्र होमिने - Gandak News
रबिन्द्रको ह्याट्रिक क्षेत्रमा बामदेव ! धनराजको पनि आकांक्षा, बामदेव उठे रबिन्द्र मिश्र होमिने
गण्डक न्यूज द्वारा २४ भाद्र २०७६, मंगलवार ११:२२ मा प्रकाशित
पोखरा । मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचन नजिकिरहँदा कास्की क्षेत्र नम्बर २ चर्चामा रहेको छ । यसको चर्चा किन पनि भएको हो भने, प्रतिनिधि सभाको लागि चुनाव हुने एकमात्र क्षेत्र हो यो । यस्तै, रबिन्द्र अधिकारीको ह्याट्रिक क्षेत्र हो भने सरकारको लोकप्रियताको मिनि जनमत संग्रहका रुपमा पनि हेरिएको छ । मुख्य दलहरुले आन्तरिक रुपमा उम्मेदवार तयार गरिरहेका छन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कास्की क्षेत्र नं. २ बाट प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ ।
तत्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं कास्की–२ का निर्वा्चित सांसद रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएपछि रिक्त स्थानमा गौतमलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी भएको हो । पछिल्लो समय नेकपामा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनजिक भएसँगै शक्तिशाली बन्दै गएका गौतमलाई सांसद बनाएर संघीय संसदमा ल्याउन खोजिएको स्रोतले जनाएको छ । नेकपाको अब बस्ने सचिवालय बैठकले गौतमको उम्मेदवारीका विषयमा निर्णय गर्ने एक सचिवालय सदस्यले बताए ।
रविन्द्र पत्नी विद्यालाई माघपछि राष्ट्रियसभामा लैजाने, बामदेवलाई कुनै हालतमा जिताउने गरी पार्टी लाग्ने, कमाण्डर खगराज अधिकारी बनाउने, अधिकारीलाई पुनर्गठन हुँदा मन्त्री बनाईने, बामदेव कस्केली जनताको मन बुझ्न नेताकार्यकर्ता भेट्दै
नेपाली कांग्रेसका धनराज गुरुङ आकांक्षी छन् । सम्भावना भएका युवा नेता धनराजलाई काँग्रेसले टिकट दिएको थिएन । यदि बामदेव उठेको खण्डमा साझा पार्टीका संयोजक रबिन्द्र अधिकारी होमिने तयारी रहेको श्रोतले जनाएको छ । गणेशमान पुत्र प्रकाशमान सिंहसँग झिनो मतान्तरले यसअघि उनी पराजित भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले गौतमलाई उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न गौतमलाई प्रस्ताव गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । ओलीको प्रस्तावलाई गौतमले पहिले अस्विकार गरेपनि अहिले कस्केली जनताको मन विचार गरिरहेको जनाईन्छ ।
यसअघि नेता गौतमले विभिन्न क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्ने चर्चा चलेको थियो । काँस्की क्षेत्र नं. २ बाट पनि उम्मेदवार बन्ने चर्चा थियो । तर, विरोध भएपछि गौतम ब्याक भएका थिए । उनले आफूलाई नभएर अधिकारीको परिवारकै सदस्यलाई कास्की–२ बाट उम्मेदवार बनाउन पनि माग गरेका थिए । गएको संसदीय निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित बनेपछि नेता गौतम डोल्पा र काठमाडौंबाट उठ्ने चर्चा भएपनि अन्तिममा आएर स्थगन हुन पुग्यो ।
नेकपाका एक सचिवालय सदस्यका अनुसार अब बस्ने सचिवालय बैठकले गौतमका विषयमा आवश्यक निर्णय लिनेछ । स्रोतका अनुसार अधिकारी पत्नी विद्या भट्टराईलाई आगामी माघमा रिक्त हुने राष्ट्रियसभाको सदस्यमा लैजाने नेताहरुको तयारी छ । गौतमलाई उम्मेवादर बनाइ विजय बनाउनका लागि कमाण्डरका रुपमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभाका सदस्य खगराज अधिकारीलाई अगाडि बढाउने नेताहरुको सोच छ ।
अधिकारीले गौतमलाई उम्मेदवारी बनाउने विषयमा स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तासँग आन्तरिक छलफल गरेका छन् । अधिकारीलाई अब हुने मन्त्रीमण्डल पूर्नगठनमा मन्त्री बनाउने सहमती भएको पनि बताइन्छ । नेताहरुको ग्रिन सिग्नलपछि गौतमले पोखराका अगुवा नेता कार्यकर्ताहरुलाई छुट्टा–छुट्टै काठमाडौं बोलाएर आफ्नो सम्पर्क कार्यालय बालुवाटारमा गहन छलफल गरिरहेका छन् । जित्ने गरी पार्टी लागेको खण्डमा आफू होमिने तयारीमा रहेको गौतम निकट श्रोतले जनाएको छ ।
कतिपयले गौतमलाई कास्कीबाट नउठाइ रिक्त स्थानमा अधिकारी पत्नी भट्टराईलाई उठाउनु पर्ने धारणा पनि व्यक्त गरिरहेका छन् । भट्टराईसँगै पूराना नेता सोमनाथ प्यासि र युवा विद्यार्थी नेता रश्मी आचार्यलगायतका व्यक्तिहरुको पनि उम्मेदवारमा पोखरामा चर्चा छ ।